Ny fampidirana ny Chitsuruya-Other-NANTONG CHITSURU FOODS CO., LTD.
Ny fampidirana an'i Chitsuruya
Fotoana: 2018-10-22 Hits: 94
Chitsuruya Enterprise natsangana tamin'ny volana Janoary, 1996, miankina amin'ny harena voajanahary kanto hahazoana vokatra ambony, fanamboarana, ahidrano voatsatsika tsena sns ... ary koa vokatra ahidrano hafa mifandraika amin'izany.
Midira amin'ny fiaraha-miasa amin'ny Japoney Fujimasa Co., Ltd. tamin'ny volana martsa 2001 ary niforona Nantong Chitsuru Foods Co., Ltd. Mba hiezaka hiditra amin'ny tsena iraisam-pirenena, hampiditra fitaovana manerantany manandanja & mifototra amin'ny vokatra tany am-boalohany, mampivoatra vaovao hatrany vokatra.
Manam-pahaizana manokana amin'ny famokarana ahidrano, zava-manitra (saosy soja, vinaingitra, mirina, saosy mofomamy, saosy barbecue ...) wasabi, sakamalao sushi ary andiana vokatra sakafo Japoney hamaly ny fangatahan'ny vahoaka ankehitriny ny sakafo nentim-paharazana, mahasalama & voajanahary.
Amin'izao fotoana izao, ny vokatra Chitsuruya, Senetsu & Edozen dia novolavolaina karazana vokatra mihoatra ny zato, nafarana tany amin'ny firenena mihoatra ny telopolo.
Ny orinasa ihany koa dia nandray ny mari-pahaizana momba ny kalitaon'ny HACCP & ISO 9001 sy BRC.
Enga anie ny vokatra Chitsuruya hiova ho vano an-tapitrisany maro hitondra anao vintana, fahasalamana ary ho tonga mpiara-miasa salama sy sambatra ary tsara.
Taloha: Ahoana ny fomba hanaovana Sukiyaki ao an-trano
Next: Ilay Fetin'ny Lohataona Sinoa